အဝတ္အထည္ နဲ႔ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းေတြကို စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူေတြ အတြက္ လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ “ေနထက္လင္း” – Cele Oscar
ပရိသတ္ႀကီး ေရ.. သ႐ုပ္ေဆာင္ ပိုငၷိဳငၼႈ ေၾတ နဲ႔ အက္ရြင္ ဇာတၠား ၾကမ္းၾကမ္း ေေၾတၾကာင့္ ပရိသတ္ေၾတ ရဲ့အားေပး ခ္စၡင္ မႈေၾတ ကို ႏြစ္ ေအတာ္ၾကာတဲ့အထိ အခိုင္အမာ ရရြိထား သူက ေတာ့ ဝါရင့္ အႏုပညာရြင္ မင္းသားႀကီး ေနထကႅင္းပဲ ်ဖစၸါတယ္..။ ေနထကႅင္း ေကတာ့ လႉဒါႏ္းမႈ ေၾတ ဆကၱိဳက္ ်ပဳလုပ္ ကာ တတၷိဳငၲဲ့ ဘက္ ေကန ်ပၫ္သဴေၾတ နဲ႔ အတူ ရပၲၫ္ ေနတာ ်ဖစ္ၿပီး ေတာႅြႏ္ေရး တိုၾကၸဲ ႀကီးမြာ အသက္ ေပးက္ဆုံး ၾသားၾက တဲ့ လူငယ္ သူရဲေကာင္း ေၾတ အၾတကႅၫ္း စိတၳိခိုက္ ခံစား ေနရတာ လၫ္း ်ဖစၸါတယ္..။ လႉဒါႏ္းမႈ ေၾတ နဲ႔ တစၹက္ တစႅမ္း ေကန ်ပၫ္သဴအၾတက္ အား်ဖည့္ ပါဝင္ေနတဲ့ ေနထကႅင္း ေကတာ့ ရခိုင္ ်ပၫၷယ္ စစ္ေၾတ ၿမိဳ႕ေပၚမြာ ရြိတဲ့ စစ္ေဘး ေရြာင္်ပၫ္သဴ ေၾတအၾတက္ အဝတ္အထၫ္ နဲ႔ အသုံးေအဆာင္ ပစၥၫ္းေၾတ လႉဒါႏ္းခဲ့ပါတယ္..။
စစ္ေဘး ေရြာင္ၿပီး အခက္အခဲ ေၾတနဲ႔ ရငၧိဳင္ၾကဳံ ေၾတ႕ေန ၾကရတဲ့ ်ပၫ္သဴေၾတ အၾတက္ အဝတ္ အထၫ္၊ စာေရးကိရိယာ၊ ေကလးမ္ား အၾတက္ အ႐ုပ္ နဲ႔ အ်ခားအသုံး ေအဆာင္ ပစၥၫ္း ေၾတ ကို အ်ခား အလႉရြင္ေၾတ နဲ႔ အတူ စုေပါင္းၿပီး ကိုယၱိဳင္ ကိုယၠ္ ၾသားေရာက္ လႉဒါႏ္းခဲ့ တာပဲ ်ဖစၸါတယ္..။ “ရခိုင္်ပၫၷယ္ စစ္ေၾတ ၿမိဳ႕ေပၚရြိ မဏီ ရတနာ ေက္ာင္းတိုက္ ရြိ စစ္ေဘးေရြာင္ ်ပၫ္သဴမ္ား အၾတက္ ျဖင့ႅြစ္ ထားေသာ ကယၦယ္ေရး စခႏ္းၾတင္ ဒီေကန. အလိုေတာ္်ပည့ၦရာေတာ္ ႀကီးအား အမႉးထား၍ ရႏၠဳႏ္ အလိုေတာ္်ပၫ္ ေက္ာင္းတိုက္ရြိ လက္ေထာက္ ဆရာေတာ္ ဦးဇင္းဘီလူး (ခ) ရြငၠဳမာရ ႏြင့္
႐ုပ္ရြင္ႏြင့္ ဗီဒီယို သ႐ုပ္ေဆာင္ ေနထကႅင္း / ဆုဒါလီ / ကိုသႏ္းေၾဆ / ကိုရိုငၲာ ႏြ င့္ ႀကီးဖိုးေဇာ္ တို႔မြာ လူႀကီး ႏြင့္ ေခလးမ္ား အၾတက္ အဝတ္အထၫ္ /စာအုပၥာတႏ္း/ေခလး႐ုပၼ္ား/ေကလးေၾတ နဲ.ပတ္သက္ေသာ အရာ မ္ားျစာ ကို ၾသားေရာက္ လႉဒါႏ္းခဲ့ ပါတယ္။ လႉဒါႏ္းမႉ အစုစု တို႔ကို သာဓု ( ၃)ႀကိမ္ ေခၚေေစသာ္ 🙏🙏🙏 ေယန႔ စစ္ေၾတ ၿမိဳ႕ရြိ စစ္ေဘး / တိုၾကၸဲေရြာင္်ပၫ္သဴမ္ား ခိုလႈံ ေနရာၾတင္ ေထာကၸံ့ ေပးနိုင္ေရး ႀကိဳးစား ေဆာျင္ရကၡဲ့ပါသၫ္။ အနႏၲသတၱဝါေၾတ ေဘးရႏ္ ကင္းခ္မ္းသာၾကပါေစ။ ်မႏၼာ်ပၫ္ႀကီး အ်မႏၧဳံး ၿငိမ္းခ္မ္းပါေစ 🇲🇲😍🙏..” ဆိုၿပီး အလႉေအၾကာင္း ကို အသိေပး ေ်ပာၿပ ထားတာပါ..။ တိုင္းရင္းသား အခ္င္းခ္င္း ေဖးမကူညီမႈ ေၾတနဲ႔ လႉဒါႏ္းမႈေၾတ ်ပဳလုပၡဲ့တဲ့ ေနထကႅင္း ရဲ့ ပုံရိပ္ေၾတ ေကတာ့ ႏြစ္သက္ ၾကၫ္ႏူးစရာ ေကာင္းတာမို႔ ပရိသတ္ေၾတလၫ္း သာဓု ေခၚဆုေတာင္း ေပးထား ၾကတာ ေၾတ႕ရပါတယ္..။
credit… G M media
ပရိသတ်ကြီး ရေ.. သရုပ်ဆောင် ပိုင်နိုင်မှု တွေ နဲ့ အက်ရှင် ဇာတ်ကား ကြမ်းကြမ်း တွေကြောင့် ပရိသတ်တွေ ရဲ့အားပေး ချစ်ခင် မှုတွေ ကို နှစ် အတော်ကြာတဲ့အထိ အခိုင်အမာ ရရှိထား သူက တော့ ဝါရင့် အနုပညာရှင် မင်းသားကြီး နေထက်လင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ နေထက်လင်း ကတော့ လှူဒါန်းမှု တွေ ဆက်တိုက် ပြုလုပ် ကာ တတ်နိုင်တဲ့ ဘက် ကနေ ပြည်သူတွေ နဲ့ အတူ ရပ်တည် နေတာ ဖြစ်ပြီး တော်လှန်ရေး တိုက်ပွဲ ကြီးမှာ အသက် ပေးကျဆုံး သွားကြ တဲ့ လူငယ် သူရဲကောင်း တွေ အတွက်လည်း စိတ်ထိခိုက် ခံစား နေရတာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်..။ လှူဒါန်းမှု တွေ နဲ့ တစ်ဖက် တစ်လမ်း ကနေ ပြည်သူအတွက် အားဖြည့် ပါဝင်နေတဲ့ နေထက်လင်း ကတော့ ရခိုင် ပြည်နယ် စစ်တွေ မြို့ပေါ်မှာ ရှိတဲ့ စစ်ဘေး ရှောင်ပြည်သူ တွေအတွက် အဝတ်အထည် နဲ့ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေ လှူဒါန်းခဲ့ပါတယ်..။
စစ်ဘေး ရှောင်ပြီး အခက်အခဲ တွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ကြုံ တွေ့နေ ကြရတဲ့ ပြည်သူတွေ အတွက် အဝတ် အထည်၊ စာရေးကိရိယာ၊ ကလေးများ အတွက် အရုပ် နဲ့ အခြားအသုံး အဆောင် ပစ္စည်း တွေ ကို အခြား အလှူရှင်တွေ နဲ့ အတူ စုပေါင်းပြီး ကိုယ်တိုင် ကိုယ်ကျ သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ “ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေ မြို့ပေါ်ရှိ မဏီ ရတနာ ကျောင်းတိုက် ရှိ စစ်ဘေးရှောင် ပြည်သူများ အတွက် ဖွင့်လှစ် ထားသော ကယ်ဆယ်ရေး စခန်းတွင် ဒီကနေ. အလိုတော်ပြည့်ဆရာတော် ကြီးအား အမှူးထား၍ ရန်ကုန် အလိုတော်ပြည် ကျောင်းတိုက်ရှိ လက်ထောက် ဆရာတော် ဦးဇင်းဘီလူး (ခ) ရှင်ကုမာရ နှင့်
ရုပ်ရှင်နှင့် ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင် နေထက်လင်း / ဆုဒါလီ / ကိုသန်းဆွေ / ကိုရိုင်တာ နှ င့် ကွီးဖိုးဇော် တို့မှာ လူကြီး နှင့် ခလေးများ အတွက် အဝတ်အထည် /စာအုပ်စာတန်း/ခလေးရုပ်များ/ကလေးတွေ နဲ.ပတ်သက်သော အရာ များစွာ ကို သွားရောက် လှူဒါန်းခဲ့ ပါတယ်။ လှူဒါန်းမှူ အစုစု တို့ကို သာဓု ( ၃)ကြိမ် ခေါ်စေသော် 🙏🙏🙏 ယနေ့ စစ်တွေ မြို့ရှိ စစ်ဘေး / တိုက်ပွဲရှောင်ပြည်သူများ ခိုလှုံ နေရာတွင် ထောက်ပံ့ ပေးနိုင်ရေး ကြိုးစား ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အနန္တသတ္တဝါတွေ ဘေးရန် ကင်းချမ်းသာကြပါစေ။ မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်ဆုံး ငြိမ်းချမ်းပါစေ 🇲🇲😍🙏..” ဆိုပြီး အလှူအကြောင်း ကို အသိပေး ပြောပြ ထားတာပါ..။ တိုင်းရင်းသား အချင်းချင်း ဖေးမကူညီမှု တွေနဲ့ လှူဒါန်းမှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ နေထက်လင်း ရဲ့ ပုံရိပ်တွေ ကတော့ နှစ်သက် ကြည်နူးစရာ ကောင်းတာမို့ ပရိသတ်တွေလည်း သာဓု ခေါ်ဆုတောင်း ပေးထား ကြတာ တွေ့ရပါတယ်..။